1.2KW RF Dummy Culayska Idaacadda FM | FMUSER
FMUSER 1.2KW RF Dummy Culayska Iibka
FMUSER 1.2KW RF Dummy Load si fiican ayuu ugu shaqeeyaa:
Marka laga reebo culeyska 1200 watt, waxaan sidoo kale haysanaa rar RF oo iib ah: 1000 watt, 1200 watt, 2000 watt, 2500 watt, 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt, 1kw, 1.2kw, 2.5kw, 3kw , 4kw, 5W, 1000W, 1200W, 2500W, 3000W, 4000W.
Sug, gudbiye noocee ah ayaad u isticmaali kartaa xamuulka dhumay? Hagaag, sirtani waa inaanay waligeed si sahal ah u odhan, laakiin waxa laga yaabaa inay adiga faa'iido kuu yeelato: Marka awooda culayska dummy-ga iyo gudbiyaha FM-gu ay isku mid yihiin, awooda wayn ee culayska dummy-ku leeyahay, waxa la isticmaali karaa gudbiye badan oo awoodo kala duwan ah, hab, macnaheedu waa haddii aad leedahay 1.2kw dummy load, waxaad isticmaali kartaa gudbiyaasha awood ka hooseeya 1.2kw (50 watt, 500 watt, 600 watt, 1kw, iwm); Marka aad haysato culeys yar oo koronto ah oo gaaraya 200KW, waxaad isticmaali kartaa daraasiin FM ah oo nooc kasta ah oo awood kala duwan leh.
Maxaad u doorataa 1.2KW RF Dummy load ee Xarunta Raadiyaha FM?
Waxaad u baahan tahay 1.2kW RF dummy load oo wanaagsan
Sidee joojinta FMUSER 1.2KW RF u shaqeyso?
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 1.2kw dummy (sidoo kale loo yaqaan anteenada dummy) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culeyska 1.2kw ee cufka badanaa waxa uu ka kooban yahay iska caabin ku xidhan hiitarka kaas oo ka saara awooda gudbiyaha
Culayska 1200 watt dummy waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Golaha taageereyaasha ee 1.2KW RF Dummy Load
Isku xidhka gudbiyaha ee 1.2KW RF Dummy Load
Dayactirka 1.2KW RF Dummy Load
Soo jeedinta qaboojinta 1.2KW RF Dummy Load
Tusmada Korontada ee FMUSER 1.2KW Dummy Load (Tixraac Keliya)
Magaca Shayga: 1.2KW RF Dummy Load
Caqabada: 50 Q + 5%
Inta jeer: DC-1 GHz (marka la codsado DC-2.5 GHz
Ugu badnaan VSWR: ≤1.10 at 1 GHz
Heerkulka: -25 ilaa +110°C
Celceliska awoodda @ 25℃: 1.2kW
Qaboojinta: Convection hawada dabiiciga ah